99,99% Vonoy ny ankamaroan'ny mikraoba mahazatra
Arovy ny fahasalaman'ny ankohonanao
Ny fahombiazan'ny bakteria an'ity vokatra ity dia voasedra araka ny fenitra nasionaly avy amin'ny maso ivoho fitiliana mari-pahaizana mifandraika amin'izany. Ny tahan'ny sterilization mahomby amin'ity vokatra ity manohitra ny Escherichia coli, Staphylococcus aureus ary Candida albicanS dia mety hahatratra 99,99% eo ambanin'ny fisedrana mandritra ny iray minitra. Ny valiny dia ho fanovozan-kevitra.
Ny étanol, fantatry ny formula molekiola C2H5OH na ny EtOH, dia ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, mora mirehitra ary miovaova. Ny éthanol izay ampahany betsaka amin'ny 99,5% dia antsoina hoe éthanol tsy mitongilana. fantatra amin'ny anarana hoe alikaola izy io, izy io dia ranon-javatra mangarahara tsy misy loko tsy mitongilana amin'ny maripanan'ny efitrano, tsindry avy amin'ny atmosfera, ny fofony ao anaty rano dia misy fofona manokana sy mahafinaritra ary somary mahasosotra. Mety levona anaty rano, methanol, ether ary chloroform, afaka mamoaka firafitra biolojika maro sy fitambarana tsy mihombo.
Ethyl acetate dia ranon-javatra mangarahara tsy misy fangarony miaraka amin'ny hanitra voankazo ary miovaova. Solubility -83 ℃, teboka mangotraka 77 ℃, index bias 1.3719, teboka flash 7.2 ℃ (kaopy misokatra), mora mirehitra, dia mety ho azon'ny klôrooform, etanol, acétone ary ether, mety levona anaty rano, fa misy solvents sasany koa mamorona fangaro azeotrope.
Mandritra ny 20 taona mahery, mifantoka amin'ny indostrian'ny famonoana otrikaretina
Eo ambany fitarihan'ny covid-19, Hand Sanitizer dia lasa filàntsika manokana amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra amin'ny toerana sasany ampahibemaso toy ny sekoly, hopitaly, fivarotana lehibe, hotely, sns. Ity vokatra ity dia misy alikaola 75% izay mety hahafaty ny coronavirus sy mikraoba hafa hiambina antsika ara-pahasalamana.